डाक्टरको अभाव समाधान गर्ने प्रस्ताव मेडिकल काउन्सिलले स्वीकृत गरेन
सरकारी अस्पताल डाक्टरको अभावले आक्रान्त छन् । डाक्टरको अभाव पूरा गर्न विदेशमा तालिम लिएका डाक्टरले स्थानीय इन्टर्नसिप गर्नैपर्ने व्यवस्था हटाएर छुट दिनुपर्ने हङकङ मेडिकल काउन्सिलले प्रस्ताव ल्याएको छ ।
बुधबारको बैठकमा प्रस्तुत गरिएका सबै चार प्रस्ताव काउन्सिलले अस्वीकार गरेपछि सरकार, डाक्टरहरूको एउटा प्रमुख संगठन र बिरामी सरोकार समूहले दुख व्यक्त गरे ।
सरकारी अस्पतालहरूमा करिब तीन सय डाक्टरको अभाव छ । धेरै विदेशी डाक्टर आकर्षित गरेर अत्यधिक भार थेगिरहेको सार्वजनिक स्वास्थ्य स्याहार प्रणालीलाई ती प्रस्तावले राहत दिन अपेक्षा गरिएको थियो । डाक्टर र नर्सहरूले कामको चापबारे केही समयदेखि बोल्न थालेका छन् ।
सम्भावित छुटका चार विकल्प बैठकमा टेबल गरिएका थिए । पहिलो अन्तर्गत हस्पिटल अथोरिटी वा डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थमा तीन वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने र त्यही समयमा ‘लाइसेन्सिङ’ अर्थात् अनुमतिपत्र लिने परीक्षा पनि उत्तिर्ण गर्नुपर्ने प्रस्ताव थियो ।
अर्काे शर्तमा परीक्षा दिएपछि ती सार्वजनिक संस्थामा तीन वर्षसम्म काम गर्नेुपर्ने व्यवस्था थियो । अन्य दुई विकल्पले सार्वजनिक क्षेत्र सम्बन्धी उस्तै आवश्यकता प्रस्तुत गरे पनि अथोरिटीसँग मात्रै काम गरे पुग्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
विदेशमा तालिम लिएका विशेषज्ञले लाइसेन्सिङ परीक्षा पास गरेपछि १२ महिने इन्टर्नसिपबाट छुट पाउनलाई अहिले पनि आवेदन दिन सक्छन् ।
काउन्सिलका अध्यक्ष प्राध्यापक जोसेफ लाउ वान–यीले सबै सदस्य सहमत हुनसक्ने समाधान पत्ता लगाउन आपूmले गर्नसक्ने जति प्रयास गरेको बताए ।
“मैले सक्दो प्रयास गरें मात्रै भन्न सक्छु,” उनले भने,“मैले गर्नसक्ने जति सबै गरें र धेरै मानिससँग कुरा पनि गरें ।”
शहरमा डाक्टरको अभाव सम्बोधन गर्न अन्य सम्भावित विकल्पबारे विचार गर्ने उनले बताए ।
“विशेषज्ञताको तालिम पाइसकेकाहरूलाई छुट दिने प्रबन्ध नमिलाए, मेरो विचारमा अन्य प्रकारका डाक्टरलाई छुट दिने व्यवस्था मिलाउनु पनि गाह्रो हुन्छ होला,” लाउले भने । उनले विशेषज्ञता तालिम लिइरहेका तथा मेडिकल स्कूलबाट भर्खर मात्र ग्राजुएट भएका र हङकङ बाहिर इन्टर्नसिप सकेका डाक्टरलाई संकेत गरेका हुन् ।
काउन्सिलले प्रस्ताव किन अस्वीकार गरेको भन्ने प्रश्नमा लाउले खुलाउन मानेनन् । बैठकमा सदस्यहरूले थुप्रै कुरा उठाएको मात्रै उनले बताए । शहरमा डाक्टरको दर्ता काउन्सिलले गर्ने गर्दछ ।
परिणामबारे एक सरकारी अधिकारीले खेद तथा दुख व्यक्त गरे । कर्मचारीको अभाव समाधान गर्न अधिकारीहरूले विभिन्न समाधानको सम्भावना खोजी गर्ने उनले बताए ।
मेडिकल एसोसिएसनका उपाध्यक्ष डा. डेभिड लाम चित–युएनले शहरकै ठूलो डाक्टरको समूह पनि दुखी भएको बताए ।
“विदेशमा तालिम लिएका विशेषज्ञका लागि इन्टर्नसिप छुट गर्न सकिन्छ भन्नेमा मेडिकल एसोसिएसन सहमत थियो,” लामले भने,“परिस्थितीमा कुनै सुधार नहुनुभन्दा ती प्रस्तावमध्ये कुनै एक लागु गर्नु नै उत्तम हुनेछ ।”
मेडिकल काउन्सिलका सदस्य समेत रहेका लाम बुधबारको बैठकमा पनि सहभागी थिए । केही प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा उभिए पनि समर्थन गरेका प्रस्तावबारे उनले केही बताएनन् ।
कार्यकारी परिषद सदस्य डा. लाम चिङ–चोइले परिणामबाट निराश र आवश्चर्यचकित भएको बताए । यसअघि उनले विदेशमा तालिम लिएका डाक्टरलाई आकर्षित गर्न आव्हान गरेका थिए । कुनै पनि प्रस्ताव पारित नभएकोमा काउन्सिलले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने उनले बताए ।
“सर्वसाधारणलाई – सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने समय थोरै भयो कि पर्याप्त नियन्त्रण छैन – के स्वीकृत भएन भनेर एउटा स्पष्टीकरण दिनुपर्छ,” उनले भने ।
बिरामीको अधिकार लगायतका मुद्दामा काम गर्ने सोसाइटी फर कम्युनिटी अर्गनाइजेसनले प्रगति हुन नसकेकामा प्रतिक्रिया जनाएको छ ।
“यो क्षेत्रको स्वार्थको सुरक्षाका लागि डाक्टरहरूले सर्वसाधारणको आवश्यकता र जनताको जीवनको सुरक्षा बेवास्ता गरेकोमा हामी एकदमै आक्रोशित छौं,” संस्थाले वक्तव्यमा बताएको छ ।
सार्वजनिक क्षेत्रमा तीन वर्ष काम गरेका र लाइसेन्सिङ परीक्षा पनि पास गरेकालाई पूर्ण छुट दिने प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुको अर्थ डाक्टरको अभावले निरन्तरता पाउनु रहेको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
हङकङ एकेडेमी अफ मेडिसिनले समाचार पढेर चकित भएको र भविष्यमा ‘ब्रेकथ्रु’ को आशा गरेको जनाएको छ । संस्थाले शहरमा चिकित्सा विशेषज्ञता सम्बन्धी तालिम दिने गर्दछ ।
“शहरमा चिकित्सकीय जनशक्तिको गम्भिर अभाव छ भनेर जनता र चिकित्सा क्षेत्र सहमत छन् । त्यसैले हाम्रो स्वास्थ्य स्याहार सेवाको प्रभावकारिता र कामको भारले थिचिएका सरकारी डाक्टरको हौसला बढाउन केही गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,” एकेडेमीले वक्तव्यमा भनेको छ,“मेडिकल काउन्सिलले यसबारे चाँडै पुनर्विचार गर्नेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौं ।”